समाजवादी पार्टीका मन्त्रीहरु फिर्ता हुँदै, माधव नेपाल जुटे यस्तो तयारीमा ! – Points Nepal
समाजवादी पार्टीका मन्त्रीहरु फिर्ता हुँदै, माधव नेपाल जुटे यस्तो तयारीमा !
प्रकाशित मिति: सोमबार, फाल्गुण २३, २०७८ समय: १४:११:१३
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले केही मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर केही नेतालाई मन्त्री बनाउने तयारी थालेको छ । पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नयाँ नेतालाई अवसर दिने तयारी गरेका हुन् ।
आधा कार्यकालका लागि मात्रै मन्त्री भएकाहरुलाई फिर्ता बोलाएर उनीहरुको ठाउँमा मन्त्री हुन बाँकी रहेका मेटमणी चौधरी, जीवनराम श्रेष्ठ लगायतका सांसदलाई मन्त्रीमा पठाउने तयारी गरेको हो ।
बिहिबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि केही मन्त्री फिर्ता बोलाएर अरु नेताहरुलाई मन्त्री बनाउनेबारे छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ ।
एकीकृत समाजवादीले आफ्ना केही मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने बताएपछिअन्य पार्टीले पनि यो विषयमा सहमति जनाएका थिए ।
सरकारमा रहेका चारवटै पार्टीले आफ्ना केही मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन लागेका हुन् । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाले यस अघि नै मन्त्रीहरुलाई आधा कार्यकालका लागि मात्रै नियुक्त गरिएको भन्दै केही सांसदलाई थुम्थुम्याएको थियो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन अगावै वा निर्वाचन आचारसंहिता लाग्नु अगावै मन्त्रिपरिषद पुर्नगठन हुने स्रोतको दावी छ । बिहीबारको गठबन्धनको बैठकमा यो विषयले निकैबेर चर्चा पाएको र कुन मन्त्रीले के कस्तो काम गरिरहेका छन् भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजबादीबाट गएका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने विषयमा चर्चा हुँदा मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन गर्नुपर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको थियो । एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाक्री, प्रेम आले, किसान श्रेष्ठ, भवानी खापुङ मन्त्री भएका छन् । Galaxy khabar ma xa yo news
Last Updated on: March 7th, 2022 at 2:11 pm